Turkiga Oo Su’aalo Culus Hordhigay Odawaa Yuusuf Raage - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Turkiga Oo Su’aalo Culus Hordhigay Odawaa Yuusuf Raage
Turkiga Oo Su’aalo Culus Hordhigay Odawaa Yuusuf Raage
Muqdisho (Walwaal.com)- Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Gen Odawaa Yuusuf, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wakiillo ka socday saraakiisha millatariga Turkiga ee ku sugan Soomaaliya.
Sida wararku sheegayaan, waxay ka wada hadleen dardar-gelinta dib-u-habeynta socda iyo dib u dhiska Ciidanka Soomaaliyeed.
Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo dhawaan ka soo laabtay safar u uku tegay SH.Hoose, gaar ahaan Awdheegle oo ay ku dagaalameen Shabab aiyo ciidanka Xoogga dalka, ayaa saraakiishan warbixin ka siiyay qorshaha dib loogu yagleelayo ciidamada xoogga dalka.
Arrimaha uu taabtay waxaa kamid ah howsha ku aadan in Amisom laga wareejiyo guud ahaan hogaaminta howlgalada ka dhanka ah Shabaab ee amniga dalka lagu hananayo.
16-kii bishaan, Shir labo cisho Magaalada Muqdisho uga socdey Taliska Ciidanka AMISOM iyo Taliska Ciidanka Xooga Dalka ayaa la isugu in taliska Ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyo hogaaminta Qorshaha Howlgalada Amniga Dalka lagu sugaayo, si hore loogu socdo.
Saraakiisha ka socotay millatariga Turkiga, ayaa dhankooda bogaadiyay sida ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya door fiican uga qaadanayaan sugida amniga guud ee dalka, iyadoo arrimahan hore geed fadhi looga ahaan jiray Ciidmaada Amisom ee dalka ku sugan tan iyo 2007-dii.
Warar kale oo madax banaan waxa ay sheegayaan in Jeneraal Odowaa wax laga weydiiyay in ciidmaada ay tababaraan Turkida ay dowladda u adeegsato caburinta Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee shaqisyaadka ka baxa dowladda, taasoo la sheegay inuu ganafka ku dhuftay taliyahan da’da yar ee Xoogga dalka hogganaka u haya.
Si kastaba, Turkiga ayaa kamid ah dallaka safka hore uga jira taageerada joogtada ah ee dowladda, si gaar ah tababarid aiyo qlaabeyn ciidmaada, iyagoo tababaray 900 askari oo Haramcad ah.
Saldhigga Turkisom e eku yaala Muqdisho, ayaa ah midka ugu weyn ee Xukuumada Ankara ku leedahay meel ka baxsan dalkeeda, waana kan lagu tababaro askarta iyo Saraakiisha Soomalaida
Previous articleMadasha Badbaado Qaran oo codsi ka dhan ah Farmajo u gudbisay Golaha Amaanka ee Q.M
Next articleRa’isul Wasaare Rooble oo sameeyay ballan qaad ku saabsan Saadaq Joon